यूसुफ र पोतिफरकी पत्नी – Word of Truth, Nepal
“यूसुफको जिउडाल राम्रो र हेर्नमा सुन्दर थियो” (उत्पत्ति ३९:६)। पोतिफरकी पत्नी यूसुफप्रति ज्यादै आकर्षित भइन् र तिनीसित यौन सम्बन्ध राख्न चाहे (३९:७)। तिनले आफ्नो अभिलाषाको कुरा यूसुफसँग एकपल्ट होइन, तर ______ ___________ गरिन् (३९:१०)।
यूसुफले परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न इन्कार गरे (उत्पत्ति३९:८)। उसले “हुँदैन!” भने र अडिग रहे। (टिप्पणी: परीक्षा आइपर्नु नै पाप होइन। पाप तब आउँछ जब हामी परीक्षालाई ठाउँ दिन्छौं।)
यूसुफले पाप गर्नु “ठू___ दु____” हो भनी सम्झे। यो स्त्रीको दुष्ट सल्लाह मान्यो भने आफ्नो मालिकसँगको राम्रो सम्बन्ध बिग्रन्छ अनि झन् बढ्ता गरी ____________को विरोधमा (उत्पत्ति ३९:९) ठूलो पाप हुन्छ भनेर यूसुफ जान्दथे। “पापको मोजमज्जा” भन्दा परमेश्वरको डर नै यूसुफको लागि ठूलो थियो हिब्रू ११:२४-२५ पनि हेर्नुहोस्।
यस ठूलो परीक्षामाथि बिजयी बन्न यूसुफ सफल भए परीक्षाको सामना गर्न सकिन्छ, विजयी सकिन्छ र शुद्ध सफा रहन भनेर यो कुराले हामीलाई हौसला निश्चयता दिन्छ। यदि परमेश्वरको अनुग्रह सहायताले यूसुफले सके भने हामीले पनि सक्छौं! (१ कोरिन्थी १०:१३; भजनसंग्रह ११९:९,११हेर्नुहोस्)।
आफूले गर्दै नगरेको अपराधको निम्ति यूसुफले दुःख सहनुपर्यो (४०:१५)। प्रभुमा शुद्ध र विश्वासयोग्य रहन यूसुफले गरेको निर्णय सजिलो वा सस्तो थिएन तरै पनि तिनी त्यो मूल्य चुकाउन तयार थिए। के तपाईं जति मूल्य चुकाउनु परे तापनि आफूलाई शुद्ध र सफा राख्न तयार हुनुहुन्छ? यूसुफलाई झूटा आरोप लगाइयो र पाउनु नपर्ने दण्ड दिइयो। परमेश्वरको डर मानेको कारण र जे ठिक थियो त्यही गरेको कारण उसले दुःख भोग्यो। आफू निर्दोष छु भनि यूसुफ राम्ररी जान्दथे। अनि वर्षौंसम्म उसले कैदखानारूपी “खाडल” लाई धीरजसँग सहे (उत्पत्ति ४०:१५ को “कैदखाना” शब्द उत्पत्ति ३७:२४ को “खाडल” नै हो)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 19:39:432020-04-28 14:16:52यूसुफ र पोतिफरकी पत्नी
यूसुफ − मिस्रमा एक दासयूसुफ तथा फाराओका कैदीहरू